दशैंमा टेलीकमका अफरै अफर, यी हुन् अहिले सम्मकै सस्ता डाटा र बोनस – Vision Khabar
दशैंमा टेलीकमका अफरै अफर, यी हुन् अहिले सम्मकै सस्ता डाटा र बोनस
। २४ आश्विन २०७५, बुधबार २०:२५ मा प्रकाशित
१. अनलिमिटेड प्याकः यो अफर अन्तर्गत जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलमा अनलिमिटेड भ्वाइस र अनलिमिटेड एसएमएस सेवा उपभोग गर्न सकिने छ । रु. ६०० मा १५ दिन समयावधिको लागि प्रत्येक दिन २ जीबी प्याक उपलब्ध गराइने छ । सो प्याक अन्तर्गत १ जीबी पिक आवर (विहान ६ बजेदेखि राती १० बजेसम्म) र १ जीबी अफपिक आवर (राती १० देखि विहान ६ बजेसम्म) प्रयोग गर्न सकिन्छ । सोही प्याक ७ दिन समयावधिका लागि मात्र रु. ३०० मा समेत उपलब्ध हुनेछ ।
५. एडीएसएलरएफटीटीएचरवाइम्याक्स तर्फ आगामी असोज ३० देखि कात्तिक ६ गते सम्म एडीएसएलरएफटीटीएचरवाइम्याक्सको समयावधि समाप्त हुने ग्राहकहरुको समयावधि कात्तिक ७ गते सम्म थप गरिने छ । यसबाट बीचैमा समय सकिए पनि ग्राहकहरुको सेवा सुचारु भइरहने छ ।
अनलाइन खवरबाट साभार